Kusolwa 'ukungalalelwa ekhaya' ngokuzibulala kukasomabhizinisi - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa ‘ukungalalelwa ekhaya’ ngokuzibulala kukasomabhizinisi
Kuthiwa ubetshelwa ukuthi usemncane ukubeka uvo phakathi kwekhaya
UMNU Bongani Ndlovu okuthiwa uzibulale phambi komndeni wakhe.
USALE ubuzana wodwa kungekho zimpendulo umphakathi wakwa Khetha, eMpendle ngesizathu esenze usomabhizinisi ongowokuzalwa kule ndawo azingqokloze ngesibhamu phambi komndeni wakhe. Kuthiwa ukwenze lokhu kukhona nonina, edinwa wukuthi kukhona obekungavunyelwana ngakho obekumele kwenziwe ekhaya. Usamangele umphakathi ngesenzo okuthiwa senziwe nguMnu Bongani “Thisha” Ndlovu (30), obezisebenza eyi-Architect, sokuzibulala phambi komndeni wakhe okuthiwa ubekhala ‘ngokungalalelwa’ njalo uma ebeka umbono emhlanganweni womndeni.
Kuthiwa ubeye atshelwe ukuthi usemncane noma ngabe uganiwe ukuthi usengaphakamisa uvo lwakhe phakathi kwekhaya.
ILANGA lithole ngelungu lomphakathi elisondelene nomndeni wakwaNdlovu, othe amalungu alo mndeni abehlangene ngeledlule ekhaya elikhulu elikwaKhetha, kubizwe naye umufi onomuzi edolobheni laseMpendle. “Akuveli ukuthi umhlangano bewumayelana nani lokho okwenze ukuthi umufi agcine esezidubula ngenhlamvu phakathi endlini obekuhlanganelwe kuyona. “Sizwe isililo emuva kokuqhuma kwesibhamu, saphuthuma singomakhelwane, safica umufi ewumfunzana phansi, opha kanzima ekhanda. Uphuthunyiswe esibhedlela eMgungundlovu, waxhunywa imishini.
“Sizwe ukuthi odokotela batshele umndeni ukuthi isimo sinzima, uma kungenzeka umufi asinde, useyokhubazeka impilo yakhe yonke ngoba ulimale kabi ekhanda kade ezidubula. NgoLwesithathu sizwe kuthiwa kugcine kumenele ukufa. Namanje sisasele ebumnyameni ukuthi yini le umufi athi ubengalalelwa kuyona uma eyiphakamisa, wagcina esenquma ukuthatha impilo yakhe,” kusho leli lungu elicele ukungadalulwa. UMnu Wonder Dlamini oyikhansela laku-ward 4, kuMasipala waseMpendle ongomunye wabaye ukuyobhonga emswanini, ekhalisana nomndeni wakwaNdlovu, uthe kubethusile ukuzwa izindaba zokudlula kukamufi ngalolu hlobo.
“Besibheke lukhulu kuyena njengoba ebesebenza ngokuzikhandla, kwazise usemncane ngokweminyaka yokuzalwa. Umufi singasho ukuthi ubeyisibonelo esihle kontanga yakhe ewadini ngokuzihlelela ikusasa elihle. Ubengusomabhizinisi okhula ngesivinini futhi ewasebenzisa amathuba abekwe wuhulumeni okusungula amathuba omsebenzi kubantu abasha,” kusho yena. Iphunzile imizamo yeLANGA yokuthola ilungu lomndeni wakwaNdlovu ukuzwa ngomshophi owehlele. Owesilisa okuthiwa ungumfowabo kamufi, ucingo lwakhe belungangeni nemiyalezo lingayicoshi. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCons Thenjiswa Ngcobo, usiqinisekisile lesi sehlakalo, wathi amaphoyisa aseMpendle avule idokodo ngokufa kowesilisa owaziwayo endaweni. Uthe imbangela yokushona kwakhe beyingakaziwa. Amaphoyisa asaphenya.
Previous articleBashaqekile kuminza ithwasa nogobela
Next articleUhlelelwa umcimbi umfundi wase-UKZN